F F မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် F in Taiwan သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၎င်း၏ finish ကိုမြင့်မားပြီးအကြမ်းခံနှင့်အံ့မခန်းဖြစ်ပြီးထိုကြောင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မြင့်မားဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောအရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - ALL STAINLESS STEEL No. F71、F71F
အားလုံးသံမဏိ float DSC&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်
●MOP 20K 280 x̊ဂ.
●DSC F71 သံမဏိ F ကိုတံဆိပ်ခတ်&စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှု၏သာလွန်သောထိရောက်မှုနှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအလင်းတန်းများအတွက်ပေါ့ပါးသောထောင်ချောက်ကိုသတိပြုပါ.
●ORIDE ORDERED နိုင် OR နှစ်ဖက်စလုံးမှ ORIZONTAL INLET နှင့် OUTLET ညွှန်ကြားချက်စထရိန်ကို INLET CHANNEL မျက်နှာပြင်တွင်တပ်ဆင်ပြီးလိုအပ်သည်အတိုင်းသတ်မှတ်ချက်များသို့လုပ်နိုင်သည်။.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/ft-steam-trap.html
အကောင်းဆုံး F ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် F ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ F ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
DSC CAST Iron FLOAT&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.F2~F12F စီးရီး ●သံသတ္တိနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 17K x ကို 230̊ဂ. ●အနိမ့် FOR သင့်လျော်သောသံခန္ဓာကိုယ်&အလယ်အလတ်ဖိအားဝန်ဆောင်မှု. ●အဆက်မပြတ်ပုံမှန်စီးဆင်းမှုမှစသောအခါအအေးလေယာဉ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအမြောက်အများအမြန်ထုတ်လွှတ်ခြင်း. ●သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်နှစ်ရှည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကောင်းသည်။. ●စဉ်ဆက်မပြတ်စွန့်ပစ်သေးငယ်တဲ့ဆူညံသံကိုကယ်နှုတ်. ●ရေနွေးငွေ့မော်ဒယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု. ●1/2&ကဗျာ;၃/4&ကဗျာ;၁&ကဗျာ;Diffus နှင့်အတူခံနိုင်ရည်ရေတူ. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.F2~F12F
DSC DUCTILE သံ float&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.F22、F22F ●DUCTILE သံခန္ဓာကိုယ်နှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 20K 250 x̊ဂ. ●DSC F22 ရေငုပ်များကို INLET နှင့် OUTLET CONNECTIONS တွင်ပါဝင်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်ပတ်စေခြင်းအားဖြင့် FIELD တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။. ●INLET ဆက်သွယ်မှုသည်မှန်၏,ပိုက်လိုအပ်ချက်အဖြစ်လက်ဝဲနှင့်ထိပ်တန်း INLET. ●1/2&ကဗျာ;စာလုံးအိတ်နှင့်လည်းချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးစစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင်နှင့်လုံး ၀ မချိတ်ဆက်နိုင်သကဲ့သို့အသုံးပြုနိူင်သည်။,ဒီမှာတစ် ဦး တည်းဝင်ပေါက်နှစ်ခုနှင့်ထွက်ရှိနှစ်ခုရွေးချယ်မှု. ●CAP အပေါ်,OUTLET CASTING တွင်အလွန်အကျွံတိုက်စားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် CONDENSATE ပေါက်ကွဲမှုလျှော့ချခြင်းအတွက် OUTLET CHANNEL သို့ချိတ်ဆက်ထားသောပိုကြီးသောနေရာတစ်ခု. ●ရေနွေးငွေ့သော့ခလောက်ထုတ်ပြန်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်,မြန်ဆန်“LR&ကဗျာ;ထောင်ချောက်အမှတ်ပြီးနောက်. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.F22
Float အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက်
DSC CAST သံမဏိ float&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.FS2~FSH12F စီးရီး ●သံသတ္တိနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ခန္ဓာကိုယ်,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K x ကို 320̊ဂ. ●1/2&ကဗျာ;၃/4&ကဗျာ;၁&ကဗျာ;DIFFUSER နှင့်အတူရေခံ HUMMER နိုင်သလား. ●ကောငျးစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေး. ●ဝတ်ဆင်ရန်ကောင်းသောခံနိုင်ရည်. ●ကောငျးသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ●လေပူအပူချိန်တွင်လေနှင့် CO2 ကိုလေမထုတ်ပါနှင့်. ●နောက်ခံဖိအားကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှု. ●ရေခဲသေတ္တာမှပျက်စီးစေနိုင်သောအဆင်းရဲဆုံးသောခံနိုင်ရည်. ●SYSTEM မှသန့်ရှင်းသောစွမ်းရည်. ●CONDENSATE ပက်ကျိများမှချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှု. ●ကိုင်တွယ်ရန်ဆငျးရဲသောစွမ်းရည်. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.FS2
အားလုံးသံမဏိ float DSC&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.FSS2~FSS9F ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 32K x ကို 320̊ဂ. ●အားလုံးသံမဏိကိုယ်ခန္ဓာအနိမ့်အဘို့အသင့်လျော်&အလယ်အလတ်ဖိအားဝန်ဆောင်မှု. ●စတင်သောအခါအအေးလေထု၏စွမ်းရည်ကိုအကြီးအကျယ်ငွေလွှဲ. ●သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်နှစ်ရှည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကောင်းသည်။. ●ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာလုပ်ငန်းအတွက်သင့်လျော်သည်. ●စဉ်ဆက်မပြတ်စွန့်ပစ်သေးငယ်တဲ့ဆူညံသံကိုကယ်နှုတ်. ●ရေနွေးငွေ့မော်ဒယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု. ●အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအစားထိုးဖြစ်ကြသည်. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.FSS5
Universal Connector နှင့်အတူရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်
အားလုံးသံမဏိ float DSC&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.F77、F77F ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 20K 280 x̊ဂ. ●DSC F77 စီးရီးများသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်အားလုံးသောသံမဏိပြားနှင့်အပူစွမ်းအင်သုံးရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်များ။. ●ထောင်ချောက်များသည်စိန်ရနံ့ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စိန်မပါသော UNIVERSAL ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။. ●ချရေနွေးငွေ့ပြီးနောက်,ဗို့နှစ်လုံးကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ထောင်ချောက်ကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်. ●သံမဏိပစ္စည်းများအားလုံးသည်အင်အားကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အလင်းရောင်ရရှိသည်။. ●အထူးအခြေအနေများတွင်သီးခြားထားရန်အကြံပြုထားသည်. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.F77
အားလုံးသံမဏိ float DSC&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်မဟုတ်ဘူး.F78、F78F ●ALL S.S.ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် CAP,ALL S.S.ပြည်တွင်း. ●MOP 20K 280 x̊ဂ. ●DSC F78 သံမဏိ F&S နှင့်အတူ T က Steam ထောင်ချောက်.S.CAP နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မတူညီပါ.သံမဏိ Casting သည်တိုက်စားမှုမှ MAX ကာကွယ်မှုပေးသည်. ●S.S.CAP နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမျိုးဆက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်. ●အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုအစားထိုးကြသည်. ●AIR ၏ကြီးမားသောအသံစတငျ UP စဉ်အတွင်း. ●ကွဲပြားခြားနားသော S ကို.S.ပစ္စည်းများအသုံးပြုသူနှင့်တွေ့ဆုံ&တောင်ကြီးမြို့;S ကလိုအပ်ချက် DSC ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်များသည်ပုံစံထုတ်ပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီရန်စမ်းသပ်သည်. ●၁/4&ကဗျာ;ထောင်ချောက်ကိုစစ်ဆေးရန် VALVAE ကိုစမ်းသပ်နိုင်သောထောင်ချောက်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်သလား. ●INTEGRAL က S.S ကိုစက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ IS. DSC အမျိုးအစားအမှတ်.F78